Dagaallo dhimasho iyo dhaawac badan gaystay oo maanta Muqdisho ka dhacay. – Radio Daljir
Dagaallo dhimasho iyo dhaawac badan gaystay oo maanta Muqdisho ka dhacay.
Muqdisho, Oct 22-Dagaallo xooggan oo gaystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, kuwaasi oo u dhaxeeyey ciidamada dawladda kuwa AMISOM, iyo xoogagga mucaaradka ah ee dawladda ku kacsan.
Dagaalladaan oo bilowday subaxnimadii hore ee saakay, ayaa inta la xaqiiyey waxaa ku dhintay 17 qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan 53 qof oo kale, kuwaasi oo la sheegay in ay u badan-yihiin dad shacab ah oo madaafiic habow ahi ku haleeshay goobahooda.
Iska hor imaadkaan ayaa bilowday kadib markii xoogagga dawladda ku kacsani ay hoobiyaan ku weerareen garoonka diyaaraha ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ka dhoofayey m/weynaha dawladda KMG ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed, oo isagu u anbabay shirka wadamada midowga afrika uga furmay magaalada Kampala ee caasumadda dalka Yugaandha.
Khasaaraha ugu badan ayaa la tilmaamayaa in uu yimid kadib markii ciidanka nabad illaalinta ee AMISOM ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho, ay ka jawaabeen hoobiyaashii garoonka diyaaraha lagu weeraray iyagoo bartilmaameedsaday meelo Suuqa Bakaaruhu ka mid yahay, hase ahaatee afhayeen u hadlay AMISOM waxaa uu sheegay in aysan jirin wax madaafiic ah oo ay rideen maanta.
Saraakiisha caafimaadka ee magaalada Muqdisho, ayaa idaacadda Daljir u xaqiijiyey dadka la soo gaarsiiyey goobahooda caafimaadku in ay u badan-yihiin dad rayid ah, kuwaasi oo badankoodu qaba dhaawacyo halis ah.
Dagaalka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaa lagu tilmaamay in uu ahaa midkii ugu xoogga badnaa ee todobaadadii ugu danbeeyey ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana marba marka ka danbaysa sii kordhaysay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee dagaalladaasi maanta ay gaysteen.